Ny toerana 7 tsara indrindra eto Italia | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Fialantsasatra any Eropa, General, Italia
rehefa mieritreritra an'i Italia izahay ampifandraisintsika matetika amin'i Roma eo no ho eo izy io, ary azo antoka fa tanàna tena tsara izy io. Mbola betsaka anefa ny zavatra ho hitanao. Raha ny tena izy dia toerana 10 ihany no vitsy, satria i Italia dia feno zorony mahavariana, toerana misy tantara sy tanàna mahafinaritra, saingy mila manomboka amin'ny zavatra iray ianao, noho izany dia ataonay ho anao ity lisitra tena ilaina ity.
Ireo no ilay Toerana 7 any Italia izay tokony ho hitantsika alohan'ny zavatra hafa rehetra. Manana toerana misy tsangambato, tanàna amoron-drano, tanàna amoron-tsiraka ary maro hafa isika. Aza adino ity safidy itodiana be ity raha mieritreritra ny hanatsara ny Italiana ianao, satria samy manana zavatra mahaliana izay hahatonga antsika hijanona sy honina amin'ity toerana ity.
1 Ny tantaran'i Roma
2 Ny tantaram-pitiavan'i Venise
3 Ny kanton'i Florence
4 Ny fironan'i Pisa
5 Nofinofy ao amin'ny Cinque Terre
6 Fetin'ny Capri
7 Tanàna nalevina tao Pompeii
Ny tantaran'i Roma
Inona no holazaina momba an'i Roma izay mbola tsy fantatsika, ary fantatra amin'ny hoe ny tanàna mandrakizay ' satria toa tsy nandalo tao aminy nandritra ny taonjato maro. Maro amin'ireo tsangambato ao amin'ny Fanjakana Romanina no mbola mijanona, toy ny Colosseum malaza, ny fitsidihany tena ilaina indrindra. Fa ankoatry ny Colosseum dia manana ny loharano Trevi malaza isika ahafahana manao firariana, afaka mitsidika ny Pantheon of Agrippa miaraka amin'ny dome goavambe na mitsidika ny Roman Forum izay miverina amin'ny lasa isika.
Ny tantaram-pitiavan'i Venise
Any Venise, iray amin'ireo tanàna tantaram-pitiavana indrindra eto an-tany no miandry antsika, ary koa iray amin'ireo tanàna voalohany indrindra, satria eo ambonin'ny rano no misy azy. Ny gondola mitaingina ny arabe sy mamaky ny toerana malaza indrindra dia zavatra tsy tokony ho hita. ny Tetezana Rialto Iray amin'ireo tranainy indrindra mamakivaky ny lakandrano izy, ary tsy isalasalana fa iray amin'ireo malaza indrindra koa izy io, koa ny lalana mamakivaky azy io dia tsy maintsy ilaina koa. Etsy ankilany, aza adino ny mitsidika ny Kianja San Marcos, mitondra lavadrano raha tondra-drano izy. Ao no ahitantsika ny Lapan'i Ducal malaza sy ny Basilika tsara tarehy any San Marcos. Amin'ny làlana dia afaka mijanona ihany koa isika amin'ny sasany amin'ireo trano fampiasa any an-tanàna izay misy tranombakoka ankehitriny.
Ny kanton'i Florence
I Florence dia tanàna mety amin'ny mpitia zavakanto, ary ao no ahitantsika tsangambato sy sanganasan'ny artista an'arivony toa an'i Michelangelo na Giotto. Raha manomboka ao amin'ny Piazza del Duomo isika dia efa eo amin'ny toerana iray misy tsangambato maro kokoa jerena, satria ny Katedraly na Duomo, ny Campanille ary ny Battistero. Toerana iray hafa tadiavin'ny mpitsidika rehetra ny Ponte Vecchio, miaraka amin'ireo trano mihantona sy mpanao asa tanana ary fivarotana malaza ao anatiny. Iray amin'ny tetezana mampiavaka indrindra eto an-tany, ary ny tetezana vato tranainy indrindra eran'i Eropa.
Ny fironan'i Pisa
Pisa dia nanjary nalaza noho ny azy mirona Tower, ary koa manana tsangambato manana fomba hafahafa, ny fomban'ny Pisan, izay Romanesque novaina indray nataon'ny Pisana. Ny fitsidihana an'i Pisa dia tsy maharitra mihoatra ny iray andro, ary ny zavatra tena mahaliana dia eo akaikin'ny tilikambon'i Pisa, izay tsy maintsy hiakaranao mba hankafizanao ny fomba fijeriny. Eo anilany ny Duomo sy ny Baptistery.
Nofinofy ao amin'ny Cinque Terre
Cinque Terre dia faritra izay misy tanàna dimy: Vernazza, Corniglia, Monterosso al Mare, Riomaggiore ary Manarola. Noho ny fitomboan'ny isan'ny mpitsidika dia mieritreritra ny hifehy ny fizahan-tany ny manampahefana ary hampihena ny isan'ireo fitsidihana isan-taona. Ao amin'ny Cinque Terre dia mahita tanàna morontsiraka tsara tarehy toa mihantona amin'ny harambato isika, miaraka amin'ireo trano miloko manome endrika tena nofinofy. Fa izy io koa dia toerana misy lanjany voajanahary miaraka amina làlana fitsangantsanganana mahaliana maro.
Capri dia efa tamin'ny andron'ny Romana nosy iray ka fahavaratra ny kilasy ambony, satria misy ny sisa tavela amin'ny villa romana. Tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia nanjary toeram-pialan-tsasatra lafo vidy indray izy io. Ny mitsidika an'i Capri dia mahita ny iray amin'ireo toerana feno hatsaran-tarehy italianina sy kanto italiana. Toerana ahafahantsika mankafy ny morontsiraka sy ny morontsiraka, ary ny fomba fijery miakatra amin'ny fialamboly nosy.
Tanàna nalevina tao Pompeii
Ho fantatry ny rehetra ny tantaran'i Pompeii, ilay tanàna fahiny izay nalevina ambanin'ny fipoakan'i Vesuvius, tamin'ny taona 79 AD. Rehefa nalevina tamin'ny fomba tampoka toy izany dia nijanona toy ny misy azy ny tanàna, ary na ny endrik'ireo fatin'ny mponina sasany aza, gaga tamin'ny fipoahana, dia voatahiry. Ity tanàna ity dia ao anaty tontolo fiarovana tsara ka manome antsika ny hevitra momba ny fomba niainan'izy ireo tamin'izany fotoana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ireo toerana 7 tsara indrindra eto Italia